Kooxaha Barcelona iyo Real Madrid oo wada doonaya daafaca Liverpool ee Virgil van Dijk, kaddib goolashii badnaa ee laga dhaliyey bilowga horyaalka La Liga – Gool FM
(Liverpool) 16 Sebt 2019. Kooxaha Real Madrid iyo Barcelona ayaa labadaba la soo warinayaa inay xiiseynayaa saxiixa daafaca naadiga Liverpool ee Virgil van Dijk.
Xiddiga xulka qaranka Netherlands ayaa horumar ballaaran ka sameeyey ka ciyaarista boosaska daafaca dhexe ee Adduunka tan iyo markii uu Reds kaga soo biiray naadiga Southampton bishii Janaayo ee sanadkii 2018-kii.
Xaqiiqdii, Van Dijk ayaa ka caawiyey Liverpool inay ku guuleysato koobkeedii lixaad ee kooxaha Yurub xilli ciyaareedkii la soo dhaafay, halka uu sidoo kale dardar kula bilawday horyaalka Premier League xilli ciyaareedkan iyagoo hoggaanka u haya horyaalka kana sarreeya haatan kooxda Manchester City.
28-sano jirkaan ayaa sidoo kale gacan ka geystay siddeed gool 79 kulan oo uu u saftay kooxda Merseyside-ka ee Liverpool.
Sida ay warinayso Jariiradda AS labada kooxood ee Real Madrid iyo Barcelona ayaa doonaya saxiixa xiddigan reer Holland xagaaga soo socda ee suuqa kala iibsiga xiddigaha, iyadoo labada naadi midkoodna uusan ku faraxsanayn xulashooyinka daafacyada dambeedka dhexe ee haatan ay haystaan.
Hubaashii labadan kooxood ayaa la tusay sida uu daafacoodu u liito marxaladaha hore ee xilli ciyaareedkan 2019-20, iyadoo Los Blancos laga dhaliyay lix gool afartii kulan ee horyaalka La Liga ay ciyaartay kal ciyaareedkan, halka Barca iyadana laga dhaliyey 7 gool.
Da’yarkii hore ee Groningen oo u tartamaya in loo caleemo saaro sanadkan abaal-marinta xiddiga ugu fiican adduunka ee Ballon d’Or ayaa weli afar sanadood ay uga harsantay qandaraaskiisa uu ku joogo garoonka Anfield.